Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "zuva", iro shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "zuva", iro shamwari manzwiro?
Mu "zuva" neizvi nzvimbo kadhi iri "zuva" pakuitika
nyanzvi pakati 3500 Yen kuti kufembera usununguke yokunyatsoongorora kadhi yakanaka kwazvo, kana kumirira ramangwana rakajeka, itariroi zvechokwadi kana kuva, zvinokwanisika kupemberera inofara mamiriro ezvinhu, pane pfungwa iyoyo.
mu asingatani kadhi chete isati kubudirira zvinhu zvikuru, kana akawana mwoyo kana rudo vane kudanana manzwiro yake, kana iye Mabhii ini zvamaronga kusarudza kuroorwa, mukuwedzera, akadai ane ini kuzozivisa pachangu kuti nharaunda uye mhuri, zvingaita kuitika kufara.
zvakanaka nzvimbo "zuva" zvinofanirwa kureva "zuva" iri, zvinoreva kuti zvinhu zviri kufambira mberi zvakanaka zvikuru mirayiridzo kwandiri. Situation kuti ruchagara mudanga rezvipfuwo, akadai dambudziko kana kukundikana yapera, uchaona zviratidzo inopenya kusvikira wazviita chinangwa. Uyo ari muukama, ipapo zviri zvakare zvichida kuva panyaya, ndipo pane kureurura kubva munhu yandaiziva rusina kukwana mberi rudo kusvikira zvino. Sezvo
manzwiro ake vari zvakajeka rakatarira kwamuri, ndiye mukuru mugumo mukana kubudirira zvikuru kunyange kusvika akashinga kubva yavo. Izvi zvinokosha kuti tirambe zvaitika, pamwe chete nepurogiramu inopenya prospectively kupiwa ezvinhu ose zuva, saka kuti chiri kupararira akapoteredza mufaro wavo, tinoratidza kuti tikoshese achinyemwerera.
asi ari manzwiro
zvakanaka nzvimbo munhu iwe harungashandurwi nzvimbo iri nokuzvikudza kuti zvinoreva "zuva" ne yakanaka rinoreva yakanaka chaizvo "zuva", uye vachabuda munyika neizvi chinzvimbo, pakuonekwa ezvinhu kana kwete maiwe, kana haana mberi kudarika rakanyatsojeka, rinomiririra kuti mamiriro ezvinhu pane mukana kuti kufambira mberi mune mwoyo divi.
kuzadzisa chinangwa netariro Kana mugwagwa refu kuti, isu mukana kuti chipinganidzo chikuru kuoneka munzira vakavanzirawo. Kunyange kana anotarira hunofadza kubva vamwe, mupfungwa dzangu dzinotevedzana murefu, kuti muve nokutsungirira aizopa kuti kwete kwenguva, pane chiitiko akadai anodonha mumvuri nezveramangwana vanhu vaviri zvingava.
Kana kuwana kadhi iri, kuti raiita manzwiro ake kunyange sokuti rakatarira kwamuri, chiratidzo chokuti chinokosha akatarisa kune mumwe. Sezvo zvakaoma zvakanaka kunyange akabvuma vake rusina kukwana mberi rudo, Zvinokurudzirwa kushumira kuramba ukama ano. Uyezve, munhu ari kudanana, kutanga kuva nyaya muchato nani kumirira zvishoma. Kana kuedza anoitwa kukudziridza ukama hwavo, angafananidzwa chokuita neizvi huchavhuniwa.